“Tsy Maintsy ho Fantatr’ireo Firenena fa Izaho no Jehovah” | Manatòna
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Ossète Poloney Portogey (Brezila) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa
“Tsy Maintsy ho Fantatr’ireo Firenena fa Izaho no Jehovah”
AOKA hatao hoe nisy olon-dratsy nanao hasomparana ka olona be dia be tsy manan-tsiny no nijaly vokatr’izany. Inona no ho tsapanao raha ianao no endrikendrehina ho nanao an’ilay izy? Azo antoka fa hiaro tena ianao. Fantatrao ve fa misy manendrikendrika koa i Jehovah? Maro no milaza fa izy no mahatonga ny tsy rariny sy ny fijaliana. Azo antoka fa te hiaro tena koa i Jehovah. Handinika ny bokin’i Ezekiela isika mba hahitana izany.—Vakio ny Ezekiela 39:7.
Hoy i Jehovah: “Tsy havelako hozimbazimbaina intsony izany anarako masina izany.” Manazimbazimba ny anaran’Andriamanitra izay milaza fa izy no mahatonga ny tsy rariny. Matetika mantsy no midika hoe laza ny hoe “anarana” ao amin’ny Baiboly. Milaza ny boky iray fa tafiditra amin’ny anaran’Andriamanitra “izay fantatsika momba azy na izay ampahafantariny momba azy, ny lazany, ary ny voninahiny.” Misy ifandraisany amin’ny lazan’i Jehovah àry ny anarany. Fantatsika anefa fa malaza ho mankahala ny tsy rariny izy ary mangoraka an’izay iharan’izany. * (Eksodosy 22:22-24) Ahoana àry raha misy milaza fa Andriamanitra no mahatonga ny tsy rariny, nefa izy aza mankahala an’izany? Manoso-potaka ny lazany sady ‘manamavo ny anarany’ izay milaza an’izany.—Salamo 74:10.
Mariho fa indroa i Jehovah no nampiasa an’ilay teny hoe “anarako masina.” (Andininy 7) Imbetsaka no resahin’ny Baiboly miaraka amin’ny anaran’i Jehovah ny teny hoe “masina.” Midika hoe tafasaraka sy madio ary mangarahara izy io. Masina ny hoe Jehovah satria masina ilay Andriamanitra tompon’io anarana io, izany hoe tafasaraka tanteraka amin’ny ota sy ny zavatra ratsy rehetra izy. Tena faran’izay manala baraka ny ‘anarany masina’ àry izay milaza fa izy no mahatonga ny faharatsiana.
Hampiasa ny Fanjakany i Jehovah mba hiarovana ny lazany. Izany koa no foto-kevitry ny Baiboly, ary manasongadina izany ny bokin’i Ezekiela. Miverimberina ao ny hoe: “Tsy maintsy ho fantatr’ireo firenena fa izaho no Jehovah.” (Ezekiela 36:23; 37:28; 38:23; 39:7) Mariho fa nilaza izy hoe “tsy maintsy”, fa tsy hoe hanan-tsafidy akory izy ireo. Midika izany fa hanery ireo firenena i Jehovah mba hiaiky fa izy tokoa no Tompo Fara Tampony ary masina sy madio ny anarany, araka izay nolazainy.
Imbetsaka i Jehovah no nilaza hoe: “Tsy maintsy ho fantatr’ireo firenena fa izaho no Jehovah.” Vaovao tsara izany ho an’ny olona tsy te hijaly sy tsy te hiharan’ny tsy rariny intsony. Hotanterahin’i Jehovah tsy ho ela izany fampanantenany izany ka hiaro ny lazany izy. Hesoriny ny faharatsiana rehetra sy izay mahatonga azy io. Hovonjeny kosa izay rehetra manaja ny anarany sy manaiky ny dikan’izy io. (Ohabolana 18:10) Tsy mba tianao àry ve ny hifandray amin’i Jehovah, ilay Andriamanitra masina sady “tia rariny”?—Salamo 37:9-11, 28.
Famakiana Baiboly Amin’ny Septambra:
Ezekiela 39-48–Daniela 1-3
^ feh. 4 Jereo ny lahatsoratra hoe “Manatòna An’Andriamanitra: Ilay Tia Rariny”, ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Novambra 2008.
Hizara Hizara “Tsy Maintsy ho Fantatr’ireo Firenena fa Izaho no Jehovah”
w12 1/9 p. 21